Zak Lavin: Biography, umsebenzi, impumelelo
Ezemidlalo Ukufaneleka, Basketball
Lavin Zack - ithalente abasha club, "Timberwolves" kusukela Minnesota. Isidlali yahlelwa yithimba kule sizini 2014/2015. Eminyakeni yamuva club alinaso impumelelo yisakhiwo sodumo kweliphezulu basketball phiko. Nokho, kuze kube yilolu suku Lavigne uyaqhubeka ukuvikela imibala yayo.
Zach wazalwa ngo Lavigne yezemidlalo umndeni. UYise ikusasa basketball ukudlalwa league baseball professional. umama Zack sika kusukela ebuntwaneni eyingoduso e ibhola.
Google basketball umfana esikoleni esiphakeme. Ngo junior Zak Lavin ithimba okwakudingeka ayenze uma isikhundla iphuzu unogada, umi ontanga yabo ubude, kuzuba ikhono futhi impendulo umbani-fast.
Kakade guy ikilasi elalithweswa iziqu ukuthi kukora okuyisilinganiso sabangu-28,5 amaphuzu ngesikhathi umdlalo, eyenziwa 2.5 esiza futhi wenza okungenani 3 rebounds umdlalo ngamunye. Ngo-2013, Zak Lavin iwine isihloko engcono basketball abadlali Washington wombuso phakathi amaqembu esikoleni.
Zak Lavin, izithombe zazo uvezwa le nto, waqala ukubonisa intuthuko eningi kuleli mdlalo uma ngitadisha e-University of California. The guy wadlalela iqembu umfundi "UCLA." Lapha umdlali abasha wembula ngokugcwele ikhono lakhe lokushaya dunks obumangalisayo ukuhlasela iringi isitha kusuka kunoma iyiphi ibanga.
Ukubuka umdlalo Zac, ochwepheshe ezemidlalo onegunya kakhulu uhlolwa amathuba akhe ukuba ngomunye the best NBA amaqembu ekupheleni ukudlala ngoba iqembu inyuvesi. Kwaba nomthelela kule nkinga ukusebenza umdlali okusezingeni eliphezulu. Ngenkathi kuqala phiko umfundi Zak Lavin njalo lilethe ithimba yengcebo okuyisilinganiso sabangu-9.4 Amaphuzu umdlalo. Nokho, intuthuko yakhe kwakungethusi abalulekile. Ngakho, kulezi zinsuku zokugcina 18 imidlalo yomzimba umfundi Levin wakwazi ukuzuza amaphuzu 10 nje omdlalo. Ngo-April 2014, Zach wanquma ukubeka phezulu ukhetho lwabo siqu kokusazolungiswa ukuba usayine inkontileka nomunye NBA amakilabhu.
Njengoba kuphawuliwe ekuqaleni indaba, Zak Lavin sikhethwe ku yonyaka inqubo okusalungiswa ukukhetha abadlali abasha club "Minnesota Timberwolves". Usizo lwabenza imisenenzi basketball futhi isivumelwano phakathi ithimba lobuholi sasayinwa-July 8, 2014.
Impumelelo enkulu kuqala Elikhulu lase Brazil ukuba umdlali weza umdlalo ngokumelene "Lakers-Los Angeles". Uma inkantolo ebhentshini ezisele basketball engu-19 ubudala, wadlwengulwa ukubeka amarekhodi NBA, kukora amaphuzu 28 iqembu lakhe. Ngasekuqaleni enze abangaphezu kuka-25 isibhamu yimpumelelo phezu ring isitha ngokuthi izabelo Umdlali weqembu, ongazange attained engu-20, kuphela aphumelela esisodwa.
Ngenkathi efanayo aseqala Zak Lavin ekhishwe lokuqala yakhe eyi-double double, esikhiqiza 22 amaphuzu ithimba nokuqedela 10 maqembu yimpumelelo. Ngakho, indoda liye langena yena ohlwini labadlali kwiligi ngubani nenhlanhla ukubeka amarekhodi ezigabeni eziningana eneminyaka engu-19.
Zak Lavin - basketball oye wahlanganyela emisebenzini okubizwa ngokuthi "ngempelasonto anezinkanyezi" ngenkathi kuqala phezulu ukuvela indiza. Ekuqaleni, le nsizwa wadlalela iqembu luthela izinkanyezi ngokumelene ithimba emhlabeni, futhi ngosuku olulandelayo iwine isihloko nombhali engcono slam dunk 2015.
Kakade isizini entsha, Zak Lavin usetha irekhodi yomuntu siqu. Ukukhuluma ngakho konke the club efanayo, "umdlali Minnesota Timberwolves 'kukora 37 amaphuzu futhi 9 rebounds kwenziwe ukulwa" Golden State ". Nokho, naphezu nani elihlaba umxhwele amaphuzu zanqwabelana Lavigne, umdlalo namanje okulahlekileyo "Izimpisi" nge amaphuzu 101 kuya ku 110.
Ekupheleni isizini ka Zack wesibili kwaba ngo ithimba ufanekisela zifiki, amalungu awo kunqunywa abaqeqeshi best of the National Basketball Association ekupheleni konyaka.
Player Izibalo ngo-NBA
Ukubamba iqhaza imidlalo - 82.
Inombolo amaphuzu kukora - 1150 (i isilinganiso 14 umdlalo ngamunye).
Imidiyeni esiza - 3.1.
Rebounds - 229 (isilinganiso 2.8 umdlalo ngamunye).
Izisitho - 69 (isilinganiso 0.8 ngayinye umdlalo).
Nemphumelelo-Imicibisholo emithathu ekhomba - 38,9% (123 isibhamu yimpumelelo aphume 316 imizamo).
Okwamanje Zak Lavin namanje imele "Minnesota", naphezu kweqiniso lokuthi club of NBA ingenye ongakhetha alithandeki kakhulu abadlali abasha. Ngigcine iqembu ifinyelele playoffs esiteji, ngonyaka ezikude 2004. Le nkomba kuyisiqalo esibi kunazo zonke phakathi kwawo wonke amakilabhu ezima namuhla kule phiko okhokhelwayo.
Redzhi Miller: Biography, izikhathi ezinhle, izithombe
Hristo Stoichkov: Biography, umsebenzi
Basketball abadlali abadumile emhlabeni neRussia
Streetball - Iyini? Kuphenywa ndawonye!
David Blatt: umsebenzi impumelelo
Izincazelo zomlando wethempeli Grigoriya Neokesariyskogo
Ezokuzijabulisa ngoba umntwana eMoscow ngempelasonto. Ipaki izingane eMoscow. Ezokuzijabulisa isikhungo izingane eMoscow
Indzaba lemfisha futhi wamemela lo abadlali: "Pirates zaseCaribbean: Dead Man Chest"
Validol: isicelo, Izinganekwane Namaqiniso
Lokhu War of Imayini: ukuhamba, umhlahlandlela, amathiphu